Preezdaanti Shimallis boqachuu Dooktara kabajaa Looreet Artiist Lammaa Guyyaaf gadda itti dhaga’ame ibsan – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Preezdaanti Shimallis boqachuu Dooktara kabajaa Looreet Artiist Lammaa Guyyaaf gadda itti dhaga’ame ibsan
On Oct 26, 2020 262
Finfinnee, Onkololeessaa 16, 2013 (FBC) -Preezdaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan boqachuu Dooktara kabajaa Looreet Artiist Lammaa Guyyaaf gadda itti dhaga’ame ibsaniiru.
Waggoota dheeraadhaaf oogummaa aartii fakkii adda ta’een uummata isaanii tajaajilaa kan turan Artiist Lammaa Guyyaa du’aan adduunyaa kanarraa boqachuu isaaniitiin gadda cimaan itti dhagahameera jedha.
Artiist Lammaa Guyyaa aadaa duudhaa fi eenyuummaan uummata Oromoo, ummattoota Ityoophiyaa addunyaa biratti akka beekamu, darbees hojiiwwan artii eenyummaa Afrikaa olkaasanii mul’isan kumaatamaan gumaachuudhaan ummata keenyaaf akkasumas nama Afrikaadhaaf oolmaa guddaa olaanidha jedhan.
Fakkeenyummaa isaan hojii aartii fakkii keessatti qabanis bara baraan kan yaadatamudha jedhan preezdaant Shimallis.
Boqachuu Artiistii qaalii kanaan maatii, firoottan, dinqisiifattoota, uummata Oromoo fi uummattoota biyya keenyaa hundaaf jajjabinnan hawwa jedhaniiru.
Baatiwwan arfan darbanitti ijaarsa hidha haaromsaaf Birriin miiliyoonni dhibbi 6 fi…
Obbo Dammaqaan Ministira dhimma alaa Neezarlaandis waliin mari’atan
Magaalaa Jimmaatti namoonni sanada sobaa qopheessuun shakkaman harkaaf harkatti…
Preezdaant Saahilawarq Jibuuttiiti bu’uuraalee misoomaa Loojastiksii daawwatan
Baatiwwan arfan darbanitti ijaarsa hidha haaromsaaf Birriin…
Obbo Dammaqaan Ministira dhimma alaa Neezarlaandis waliin…
Magaalaa Jimmaatti namoonni sanada sobaa qopheessuun…